सम्झौता कार्यान्वयन नगरे फेरि सत्याग्रह बस्ने डा. केसीको चेतावनी - Ujyaalo Nepal
सम्झौता कार्यान्वयन नगरे फेरि सत्याग्रह बस्ने डा. केसीको चेतावनी
By ujyaalo nepal	 On २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०६:२९
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामूलक बनाउने सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको जनाउँदै फेरि सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी डा केसीले वर्तमान सरकारले पनि बारम्बार गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन नसकेको उनले बताएका छन् ।
देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुलगायत सबै सरोकारवालाहरुसमक्ष मागहरु प्रस्तुत गरेको र यी माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने डा केसीको चेतावनी छ।
प्रथम त सवै नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरु (विदेशमा वस्ने लगायत)मा हाम्रा सवै अभियन्ता साथीहरुको तर्फबाट नव वर्ष २०७९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
विगतको सरकारले जनताको हक हितका लागि गरिएका शान्ति पूर्ण सत्याग्रह सहितको अभियान हरुलाई( माग सम्बोधन गर्नको साटो )राज्य संरचना प्रयोग गरि हिंसात्मक ढंगले वारम्वार तुहाउने प्रयास गरियो। वर्तमान सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर हामीसित बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। देश संघीयतामा गएपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको जिम्मा लिएका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। फलस्वरुप स्वास्थ्य चौकीदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरुले सीमित सेवा सशुल्क दिने गरेका छन्। देशैभरका स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी व्यवस्था अनुसारको निःशुल्क औषधि वितरण गर्न सकेका छैनन्।
यही अवस्था अर्को पाँच वर्ष पनि दोहोरिने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले आसन्न स्थानीय र त्यसपछिको प्रादेशिक तथा आम चुनावमा पार्टीहरुको सही प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य बनेको छ। त्यसैले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुलगायत सबै सरोकारवालाहरुसमक्ष निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दर्छौं। यी माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।
१) तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्। सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्। स्वास्थ्य चौकी देखि जिल्ला/ प्रदेश अस्पताल हरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। त्यस्तै हामी संग समझौता भए अनुरुप डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पांचथर मा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एम वी वी एस लगायतका कार्यक्रम हरु को पठन पाठन शुरु गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु मा स्नातकोत्तर तह को निशुल्क पठन पाठन को लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम (विचमाअवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोग को व्यवस्था गरियोस्।
प्रकाशित: २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०६:२९